"Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy". - Sal. 127:1.
Ireo ankohonana eto an-tany dia nataon'Andriamanitra ho tandindon'ny ankohonana any an-danitra. Anisan'ny fitaovan'Andriamanitra mahomby indrindra ho amin'ny famolavolana toetra kristianina sy ho fampandrosoana ny asany ny tokantrano kristianina miorina sy miaina araka ny planin’Andriamanitra.
Voaseho eo amin'ny fiainan'i Jesôsy ny maha-zava-dehibe ny fiainan-tokantrano sy ireo fahafahamanao ao aminy. Izy izay tonga avy any an-danitra mba ho ohatra ho antsika sy ho mpampianatra antsika dia niaina telopolo taona tao anivon'ny tokantrano iray tao Nazareta.
Ny reniny no olombelona mpampianatra azy voalohany. Avy tamin'ny vavany, sy ireo horonambokin'ny mpaminany, no nianarany ny amin'ny zavatry ny lanitra. Tokantranona tantsaha no nisy azy, ary tamim-pahatokiana sy tamin-jotom-po no nanatontosany ny anjara raharahany tao an-tokantrano. Mpanapaka ny lanitra Izy, ary fifalian'ny anjely ny nankatô ny baikony; kanefa indro Izy tonga mpanompo sady zanaka be fitiavana sy mpankato (...)
Rehefa nahazo fiofanana toy izany Izy, dia niroso tamin'ny iraka nomena Azy, ka tamin'ny fotoana rehetra nifandraisany tamin'ny olona dia nampihatra hery miasa mangina nitondra fitahiana Izy sy hery manova izay tsy mbola nisy toy izany teto amin' izao tontolo izao.
Aoka ny tokantranonao ho azon'i Kristy vangiana sy itoerana maharitra. Aoka ho fantatry ny olona amin'ny alalan'ny tokantranonao fa miaraka amin'i Jesôsy ianao ary efa nianatra taminy (...)
Mazoto mamangy ny tokantrano izay mankato ny sitrapon'Andriamanitra ny anjelin'ny lanitra . Eo ambanin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia ho tonga toerana famelombelomana ho an'ny mpivahiny sasatra sy torovana ny tokantrano toy izany. Ho voaaro tsy hanao izay tiany ny izaho. Ho voavolavola ny fahazarana tsara. Hisy ny fitsinjovana ny zon'ny hafa. Ny finoana miasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy no hanjaka sy hanapaka ny tokantrano manontolo. Ny maha-kristianina anao dia refesina amin’ny toetran'ny fiainanao ao an-tokantrano. Ny fahasoavan'i Kristy no hahatonga izay mandray azy ho afaka hanao ny tokantranony ho toerana sambatra, feno fiadanana sy fitsaharana.
Aoka ny hazavan'ny fahasoavan'ny lanitra hiparasaka hanazava ny toetranao ka hahatratra ny tokantrano.